Tantsaha nefa tsy manana tany hambolena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Niantraika tamin’ny fiveloman’ny tantsaha eny ambanivohitra ny aretina Covid 19. Misedra olana ny ankamaroany taorian’ireny fihiboana ny taona 2020 ireny araka ny fanadihadihana nataon’ny O.N.G FIANTSO Madagascar. Nihena ny vola miditra manoloana ny fiakaran’ny vidim-piainana izay niteraka fahasahiranana ho azy amin’ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Isan’izany rehefa marary ka tsy maintsy andaniana vola raha tsy vita eo an-toerana ny fitsaboana fa voatery ho entina miakatra ety andrenivohitra. Fahasarotana mianjady amin’ny tantsaha ihany koa rehefa misy ny raharahan’ady atao eny amin’ny Fitsarana. Hany ka amidiny ny taniny izay matetika tsy sahaza ilay tany ny vola ividianan’ireo mpandraharaha izany fa lasa varo -boba. Vokany vao mainka miha mahantra ny Tantsaha satria mihena indray ny velarantany ananana azo ambolena.
Ankoatr’izany mirongatra ny ady tany toy izay miseho ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ivoamba, Distrika Lalangina ato amin’ny Faritra Matsiatra Ambony. Samy mpandova ny toerana atao hoe Ikalohazo ny fonkonolona monina ao amin’ny Fokontany Ambodirano. Ankehitriny anefa nahoron’ny Lehilahy iray ho azy samy irery ny tany. Olona mbola naman’ny mpandova izy fa nikarakara irery ny momba ny toerana avy eo lasa nifindra aminy ny fananana. Idirany avokoa ireo tany efa voajary sady sakanany tsy hiasa eo intsony ny hafa. Tsy manaiky izany ny mponina ka nampiditra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana ary eo am-piandrasana ny didy avoakan’ny Tribonaly. Araka izany, mitebiteby ny tantsaha ka tsy tafatombina tsara amin’ny famokarana izay ataony miahiahy ny amin’ny taniny sao lasan’olona.
Anisany olana tsy ahafahan’ny vahoaka mizaka ny zon’ny fananan-tany ny lesoka ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny fananan-tany. Nomarihin’ny mpanara-maso eny anivon’ny fitsarana ara-bola io. Nambarany ny fandaniam-potoana mahazo ny olona amin’ny fikarakarana ny taratasy momba ny tany. Tsy misy ny serasera (fifanakalozam-baovao) mazava eo amin’ny mpanjifa sy ny fananan-tany ary ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Tsy fahalavorariana amin’ny fikajiana ny atontan-taratasy ho fiarovana ny boky tany nefa rehefa rovitra na very izany dia tsy misy ny fahafahana mamerina azy.
Zo fototra ny fananana tany
Tsy anavahana saranga anefa ny fisitrahana ny Zon’ny fananana tany.
Tsy vitan’izany fa isan’ny Zo fototra maha tantsaha ny fananana tany ary hamafisin’ny lalam-panorenana Malagasy fa afaka mizaka ny Zo hanana tany ho azy ny olom-pirenena. Anatin’ny fanambarana eran-tany ny Zon’olombelona tamin’ny 10 desambra 1948 ihany koa. Araka ny fantatra manko dia iharan’ny ramatahora isan-karazany ny mpiaro ny zon’ny fananan-tany indrinndra fa ny eny ambanivohitra.
Antso avon’ny fitsarana ara-bola amin’ny fanjakana ny mba hisian’ny lalana ahazoan’ny tompony boky tany vaovao indray ka tsy ahavery ny zony maha azy ny tany. Ny hametrahana rafitra mpanara-maso ny atontan-taratasy karakaraina ao amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany. Kendrena amin’izany ny hialana amin’ny fiverimberenan’ny mpanjifa sy ahafantarany mazava ny fe-potoana mampanan-kery ny taratasy .
Mifandraika amin’izany ny fanairana ataon’ny O.N.G FIANTSO Madagascar ny tokony anomezan’ny Fanjakana tany maimaim-poana ho an’ny tantsaha. Tanjona ny ahafahan’ny tantsaha mihary an-kalalahana sy tsy hahasarika azy hifindra monina an-tanan-dehibe. Zava-misy manko betsaka ny tany lava volo eto Madagasikara saingy mbola vitsy amin’ny tena mpamboly no misitraka izany araka ny fanambarany. Nisy ny famolavolana tolo-dalana hiarovana ny Zon’ny mpiaro ny fananan-tany noho ny karazana tsindry sy Antsojay mihatra amin’izy ireo.
Nambaran’ny mpandrindra Nasionaly ny O.N.G FIANTSO Rtoa Razafindrahasy Amelie fa efa tamin’ny taona 2018 ny fahavitan’ny Tolo-dalana. Nanohana izany ny ministeran’ny Fitsarana sy ny fiarahamonim-pirenena ary hatolotra eny amin’ny Antenimieram-pirenena. Faniriana ny handinihana haingana ny volavolan-dalana sy handanian’ny Solombavam-bahoaka izany mba hisitrahan’ny vahoaka ny Zony.
Araka io boky hitantsika amin’ny sary io dia olana efa hatry ny ela io resaka tantsaha tsy manan-tany io. Olana hitombo hatrany arakaraka ny fivelaran’ny tanan-dehibe rahateo koa izany.